म खाली गर्भवती हुनुको अनुभव लिन चाहान्छ् । म यति बुझ्न चाहान्छु, एउटा बच्चा मेरो शरीरभित्र कसरी विकसित हुन्छ र म उसलाई आफ्नो गर्भभित्र कसरी हुर्काउन सक्छु ? म आफ्नो शरीरमा आउने परिवर्तनलाई हेर्न चाहान्छु, महशुस गर्न चाहन्छु । मेरो छाला कसरी तन्किन्छ हेर्न चाहान्छु । म आफ्नो शरीरभित्र रहेको बच्चाको हलचललाई.....
काठमाडौं । अनलाइन पठनपाठनको समयमा श्रीमतीसँग हेर्न नसक्ने अवस्थामा फेला परेका शिक्षकले माफी मागेका छन् । कोलम्बियाका एक क्याथोलिक स्कूलका शिक्षकले उनको श्रीमतीको हेर्न नसक्ने भागहरु सुम्सुम्याइरहेको भिडियो भाइरल भएको थियो । विद्यार्थीहरूको कक्षाको बेला जूम कल बन्द गर्न बिर्सिएपछि उनको सबै हर्कत.....
मनोरञ्जन । पछिलो समय सामाजिक संजालमा अभिनेत्रीहरु गर्भवती भएको फोटो भाइरल हुने क्रम बढेको छ । यही क्रममा नेपालि फिल्म क्षेत्रका दुइ अभिनेत्रीहरुले आफु गर्भवती भएको तस्विर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । अभिनेत्री प्रियंका कार्की र ऋचा शर्मा नेपालि फिल्म क्षेत्रको अभिनेत्रीहरुमा एकदमै.....
ईटहरी । नेपालमा सिने क्षेत्रका अभिनेत्रीहरु विविध कारणले चर्चामा आईरहन्छन् । कोहि नराम्रा काम वा आलोचना हुने विवादिन कार्य गरेर भने कोहि राम्रा कामले चर्चामा आउने गर्छन् । यस्तै सदाबहार चर्चामा रहिरहने नायिका हुन प्रीयंका कार्की । कहिले उनी प्रेमका कारण त कहिले अन्तरबार्ता र तस्बिरका कारण पनि चर्चामा.....
मनोरञ्जन । काठमाडौं । समयसमयमा चर्चामा आइरहने महिला अधिकारकर्मी सावित्री सुवेदी चर्चामा । यो भन्दा पहिले पनि विभिन्न ब’यानका कारण चर्चामा आएकी उनी त्यसरी नै भाइरल । उनले एक अन्तर वार्तामा आफु बाबु विनाको आमा बन्न चाहेको उल्लेख गरेकी छिन् । आफु अहिले तीस वर्षको भएको भन्दै अबको पाँच वर्ष पछि कुनै पुरुषसँ.....
रोचक । आज हामिले एक अचम्म मान्ने पोस्ट लिएर आएका छौ । र त्यो पोस्ट कहाँ बाट कसरी आयो ? हामिले यो खबर सत्य हो या झुटो हो भन्ने अझै बाहिर भने आएको छैन । यो पोस्ट हामिले फेसबुक गुरुप मा ताजा समाचार बाट लेखेका हौ । भने यस्को यथार्त कुरा के हो आउन बाँकी नै छ । यो समाचार अन्तमा लेखिएको छ । हामिले माथिका सब्दहरु जस्ट.....
नोट: यो भिडियो को लिन्क तल लास्ट मा राखिएको छ । भिडियो हेर्न तल जानुहोला । पानीभित्रबाट सहतमा निस्केसरी छालामा बिस्तारै तीनवटा फरक-फरक रंगका सुईहरु प्रस्ट देखिन थाले। रातो रंगको धर्सो १२ अंकतिरको थोप्लो तिर सोझियो। निलो र हरियो रंगको सुई ६ बजेको थोप्लो तिर तेस्रियो। सुईहरु देखिएको ठाउँ छाम्दा पनि महसुस.....
मनोरंजन । यो समाचार को भिडियाे अन्त्यमा छ । भिडियो हेर्न तल लास्ट मा किल्क गरि हेर्न सक्नुहुने छ । नेपाली श्रीमान प्रदेशमा बितेपनि नेपालमै एकल जीवन बाँचिरहेकी फिलिपिनी बुहारी फिलिपिन्सकी २९ वर्षीय रुजान जोय र धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका - १० का मोहम्मद मजहर दुबै कतारको एकै कम्पनीमै बिक्रेताको.....
मनोरंजन । नेपाली बोल्ने र नेपाललाई मन पराएर माया गर्ने धेरै विदेशीहरु छन् नेपालमा । तीनै मध्यकी एक हुन् विउन्सी । उनी अफ्रिकन हुन् । लकडाउनको समयमा नेपालमै थुनिएकी विउन्सीले राम्ररी नेपाली बोल्न जाछिन् । नेपाली बोल्ने मात्र नभई उनले नेपाली लोक गीतहरुपनि उत्तिकै राम्रो लयमा गाउन जान्दछिन् । उनको बोली.....
रोचक । हँसिली र स्टाइलिस कपडामा सजिएकी सन्ध्याले आफ्नो उमेर ४० वर्ष पुगेको बताउँदा जो कोहीलाई पत्याउन गाह्रो नै हुन्छ । तपाईं मुस्किलले ३० वर्षकी देखिनु हुन्छ । यसको रहस्य के हो रु’ सन्ध्याको उत्तर थियो प्रेमी छैन श्रीमान् छैन परिवार छैन र तनाव पनि छैन । सन्ध्या बंसल एक नामी कम्पनीमा मार्केटिङ अफिसरका.....